Aiza To Jereo ny Mahavariana Street Art In Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Aiza To Jereo ny Mahavariana Street Art In Eoropa
Street kanto dia kanto ankehitriny endriky ny fanehoan-kevitra izay mahatonga ny tanàna tsara tarehy kokoa. Ny sary an-drindrina eny an-dalana tsara koa ny mety hitaona ny fanahinareo mba mieritreritra ny foto-kevitra manan-danja ny fiaraha-monina na hampahatsiaro anareo ny ny asa ny mpahay tompo.
Cities Eoropa dia feno ny toerana lehibe feno zavakanto an-dalambe sy ny soratsoratra. Azonao atao ny mandray ela mandeha amin'ny alalan'ny arabe tian-dry zareo ireo sary amin'ny rindrina ary tsy leo. Ity misy mahavariana zavakanto an-dalambe, ary aiza no hahita izany any Eoropa:
London dia iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ho an'ireo izay mankasitraka an-dalambe ny zavakanto sy ny mpanakanto ny tenany. Anisan'ny an-dalambe ianao dia afaka mitsidika ny hahazo ny fatra ny mahafinaritra kanto, Camden sy Shoreditch miavaka. Na izany aza, Brick Lane sy Southbank dia malaza toerana, koa. Na izany aza, raha tadiavinao toerana malaza indrindra, loha tsy mahazo manao Shoreditch.
Paris Feno ny toerana mafana eny an-dalana ianao, Matetika izy ireo no span araka ny arabe iray manontolo. Head ny faha-10 sy faha-11 arrondissements amin'ny alalan'ny Rue Saint-Maur. Tena feno Shepard Fairey mainty sy fotsy sary eo amin'ny rindrin'ny trano, izay mahatonga azy ho lehibe mandeha. Zavatra tsy ela 2km arabe intersects amin'ny Rue Oberkampf, mahaliana toerana avy amin'ny fomba fijery ny zavakanto an-dalambe.
Berlin ny East Side Gallery dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra eto an-tany ho an 'ireo izay tia zavakanton'ny tanàn-dehibe. Ny tanàna no efa tànana hafa kely zavakanto an-dalambe sehatra, angamba ohatra tsara indrindra ao Kreuzberg sy Mitte. Misy amin'ny distrika roa mahafatifaty ireo sakelidàlana anaty sy ny zavakanto an-dalambe malaza farantsa. Head ny atsinanana faran'ny Kreuzberg distrika mba hahita ny tsara indrindra kanto.
Roma dia nanana lalana be vato manaiky an-dalambe ny zavakanto, fa io tanàna tsara tarehy ankehitriny farany namela ny zavakanton'ny tanàn-dehibe creatives mba haneho ny heviny. Misy distrika vitsivitsy izay zavakanto an-dalambe, tsy nisy tsikelikely ny cropping. Na izany aza, ny toerana tsara indrindra mba hitsidika mety ho San Lorenzo, ny manodidina miaraka amin'ny betsaka mavitrika soratsoratra. Raha mitsidika Roma ianao mitady sasany mahafinaritra zavakanto an-dalambe, mifantoka amin'ny Via Enotri, Via Ausoni, Via dei Sardi sy Via dei Sabelli.
Graffiti any Frankfurt
Frankfurt dia tanàna iray tsy mety manantena ny hahita ao ny lisitry ny zavakanto an-dalambe mafana fo, araka ny efa tsara dia tsara kokoa malaza ho raharaham-barotra tanàn-dehibe. Na izany aza, misy afaka hilaza fa na dia toy ny tanàna izay mora manana mafy zavakanto an-dalambe teny, ny ankamaroany nikomy amin'ny avo vidim-piainana. Frankfurt manana be dia be ny eny an-dalambe manodidina ny kanto fiantsonan'ny fiaran-dalamby ary ny afovoan-tanàna. Ny Hall ny Fame amin'ny Ratswegkreisel koa hitsidika toerana tsara.
Amsterdam ny zavakanto an-dalambe toerana dia tena mahery, ary ny zavakanton'ny tanàn-dehibe tonga aza tranom-bakoka fampirantiana. Ny toerana tsara indrindra ao amin'ny Amsterdam fa ny zavakanto an-dalambe no Spuistraat, Wijdesteeg, ary NDSM, anisan'izany ny faritra afovoan-tanàna. Azonao atao ihany koa ny maka ny zavakanto an-dalambe fitetezam-paritra avy amin'ny Amsterdam Central Station. Ny zava-misy fa io fitsidihana misy milaza aminao ampy momba ny mpiavonavona ity tanàna ity dia avy ny zavakanto an-dalambe.
Copenhagen dia tanàna lehibe, raha tianao ny hahita maro loko sy ny zavakanto an-dalambe famoronana - na dia amin'ny olona ny trano! Christiania no toerana tsara indrindra hahita ny asan'ny mpanakanto manan-talenta an-drenivohitra, ka ho azo antoka ny tsy hanapaka azy.
Raha vonona ianao ny mahita ny tsara indrindra eny an-dalana zavakanto Eoropa tsy maintsy atolotra; izany tanàna rehetra izany dia mora azo idirana amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. Boky ny tapakila ara-potoana, ary miomana ny ho liana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-street-art%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Copenhagen Frankfurt soratsoratra London Street Art travelamsterdam travelberlin travelparis travelrome